Yahoo Weather, iray amin'ireo fampiharana toetr'andro tsara indrindra | Androidsis
Androany aho te-hampiseho iray amin'ireo fampiharana tsara indrindra amin'ny fikajiana ny toetrandro izay azontsika alaina maimaim-poana ao amin'ny Google Play Store.
Ny fampiharana dia tsy misy hafa fa Yahoo Weather ary azontsika natao ny nampiditra azy tao amin'ny katalaogin'i Fampiharana mahavariana ho an'ny Android de Androidsis.
Ny zavatra voalohany azontsika asongadina amin'ity Fampiharana maimaim-poana ho an'ny Androids-tsika dia ny fampiasa feno izay anolorany antsika avy amin'ny interface-friendly sy ny sary tsy azo resena.
Sary vitsivitsy izay, araka ny hitantsika amin'ny pikantsary samihafa izay apetako eto, dia manome anay ny fampahalalana ilaina momba ny ora ankehitriny eo amin'ny faritra misy antsika ary koa amin'ny antsipiriany vinavina mandritra ny dimy andro manaraka ary fampahalalana ilaina toy ny hafainganan'ny toetr'andro, ny hamandoana amin'ny rivotra, ny rotsakorana, ny maripana farany ambony indrindra ary ny fahatsapana hafanana.
Ireo sary mampihetsi-po ampiasaina amin'ny mombamomba ny fampiharana sy ny momba azy Widget an'ny Desktop dia nalaina mivantana avy Flickr ary ampifanarahina ho azy araka ny tanàna misy antsika sy ny toetr'andro mafana ao amin'ilay faritra.
Avy amin'ny sehatr'asa misy azy dia azontsika atao ny mampifanaraka ireo sary ampiasaina hanehoana antsika ny toetran'ny atmosfera rehefa mifandray amin'ny a isika. Tambajotra data Wifi, ity dia mety indrindra amin'ny fitehirizana ny tahan'ny Internet amin'ny data sy ny mpandraharaha.
Mba hamaranana ny filazanao fa azontsika atao Widget birao dimy lehibe Hita amin'ny habe rehetra mba hanomezana fahafaham-po ireo mpampiasa be fangatahana indrindra.
Fampiharana iray izay avy eto Androidsis Ary izaho manokana dia manoro hevitra anao ny hanandramanao azy satria azo antoka fa ho tianao izany.
Fanazavana fanampiny - Fampiharana mahatalanjona ho an'ny Android, Androany maraina tsara
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Androidsis » Fampiharana Android » Yahoo Weather, fampiharana manaitra amin'ny fizahana ny toetr'andro
Samsung dia nanambara fanontana Samsung Black roa ho an'ny mini Samsung Galaxy S4 sy S4